Erdogan oo ku guulaystay hogaanka Turkiga iyo awoodo dheeraad ah – Radio Daljir
Juunyo 25, 2018 7:55 b 0
Recep Tayyib Erdogan ayaa ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalkaasi, sida ay ku warameen saraakiisha guddiga doorashada.
Natiijada cusub ayaa muujinaysa inuu helay kuraas ku filan oo uu guul ku gaaray, iyadoona ay lasocdaan awoodo dheeraad ah oo uu helayo madaxwayne Erdogan oo noqanaya madaxwaynihii u horeeyey ee yeesha awoodda fulinta.
97.7 waraaqihii la tiriyay ee doorashadii Axaddii ayaa kala bar codadka waxa ay noqdeen mid uu guusha uu ku hantiyo madaxwayne Erdogan, sida uu sheegay Saadi Guven oo ah madaxa guddiga sare ee doorashada YSK, oo saxaafadda kula hadlayay magaalada Ankara.
Wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa sheegtay inuu Erdogan helay 52.5 codadkii la tiriyay.
“Dimuqraadiyadeena waa ay kuu guulaysatay, shacabku waa uu guulaystay, Turkiga waa uu guulaystay” ayuu Erdogan u sheegay dad badan oo xamaasadaysan oo ka mid ah taageerayaashiisa oo isugu soo baxay magaalada Ankara, isagoona u mahadceliyay muwaadiniinta daliisa ee coadka dhiibtay.
Hogaamiyahan 64-sano jirka ah ayaa shaaciyay inay sidoo kalle guulaysteen isbahaysiga shacabka , xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ee AK Party iyo MHP oo uu sheegay inay guul ka gaareen inta badan aqlabiyaddii baarlamaanka ee doorashadii Axaddii la qabtay.
Kahor inta uu usocdaalin magaalada Ankara ayaa waxaa uu hadal uu ujeediyay shacabka isku soo baxay ee taageersan siyaasdihiisa, kuwaasi oo isugu soo baxay magaalada Istambuul ee dalka Turkiga.
Muddo 15-sano ah ayuu xukumayay dalka Turkiga Mr Erdogan, isagoona mar soo noqday raysal wasaare iyo hadda oo uu madaxwaynaha dalka uu ku guulaystay.